हिमाल खबरपत्रिका | शुभकामना!
पुरानो वर्षलाई अन्माएर नयाँको स्वागत गर्ने शुभकामना आदानप्रदानको समय भन्नु असलमा 'गिभ एण्ड टेक' को मौसम हो!
नयाँ वर्ष टुप्लुकिनुलाई त्यसै 'गिभ एण्ड टेक' को मौसम भनिएको होइन। यस अवसरमा कूट खेलमा अभ्यस्त कुटिल हुन् वा झूटमूटका झ्पटलाल; सबै मधुरस टप्किने सन्देश बुन्न व्यस्त छन्। अकूत सम्पत्ति काण्डमा अदुवा दलिएको कर्मचारी छरितो प्रशासनको कामना गर्छन्, भ्यागुते खेलोमा निर्लिप्त नेता द्रुत गतिमा नयाँ नेपाल बनाउने सन्देशको बिस्कुन छर्छन्। अपात्रले ओकलेको (अ) शुभकामना भनेर क्यार्नु? गडड ओइर्‍याएपछि नसुमरी निजात पाइन्न!
अघिल्लो वर्षलाई अशुभ सावित गर्न तम्सिनेहरूको मुखमा बुची कस्न उपलब्धिहरूलाई फर्केर नियाल्न नसकिने भने होइन। जस्तो, सदन भित्र होस् वा सडकमा– तोडान फोडानकै भरमा राजनीतिको पसल चलाउँला भन्नेहरूले लप्पु खानु चानचुने उपलब्धि होइन। जोरजुलूमको राजनीतिले हातलागी शून्य मात्र नभई ऋणात्मक समेत हुने छ्याङ्ग हुन पुग्यो। नौझाले नेताहरू भिडेर राजनीति हल न चल हुँदा जनतालाई जिम्मा दिए 'दूधको दूध, पानीको पानी' हुने बाग्लुङेहरूले देखाइदिए।
नन्दप्रसादको दुर्दान्त नियति रच्ने बिरालाहरूले डा. गोविन्द के.सी. को अनशनका पक्षमा म्याउँ गर्नु नेपाली समाजले ठूलै छलाङ हानेको दसी हो। पाखुरी देखाएर ऐजन–ऐजन पारम्ला भन्ठान्नेहरूले जनताको न्यायोचित मागलाई दूध–भात झ्ैं उदरस्थ गरी सदा हजम गर्न नसकिने बुझेर मरेतुल्य भए होलान्, अब। उता, सत्तो र पैसो भए'सि लोकलाई लतारेरै व्यापार चलाउन सकिन्छ भनेर लागेका कणहरू पनि अनशनी डाक्टर अघिल्तिर लुत्रुक्क भए। त्यस्तै, सार्वजनिक ओहोदामा बसेर अन्टसन्ट बक्ने तित्रामतिहरूले साढेसातीले दया गरे'नि फेसबुके र ट्वीटेहरूले नछाड्ने कुरो बुझने कर्म त्यही ७१ मा गरे।
गुलिया कामनाले लदालद नयाँ वर्षहरू कति आए, कति गए। ती थोत्रिए, मक्किए अनि स्मृतिबाट विलाए। गत वर्षको उछित्तो काढ्न छाडी त्यसले सिकाएको पाठ मनन् गर्दै अघि बढे नयाँ वर्ष उपलब्धिपूर्ण होला। नत्र, उही रुम्जाटारमा उभिएर ७२ साललाई धारे हात लाउँदै शुभकामनाको खेतीमा रुमल्लिनुपर्ने हुन्छ, अर्को वर्ष। राजनीतिक नेतृत्वको लागि ७२ साँच्चै 'गिभ एण्ड टेक' को मौसम बनोस्। माननीयहरूले संविधान बनाउने काम संविधानसभा भित्रैबाट फत्ते पार्ने हिम्मत देखाउन्, कर्मचारीले तलबभत्ता बराबरको काम निप्टाउन्, व्यापारीहरूको लूटतन्त्र सिनित्त होस्!